Guddoonka Baarlamaanka Puntland oo soo dhaweyn u sameeyey wafuuda baarlamaanada Garowe ku sugan | Somali National Television - sntv.so
Home AQALKA SARE Guddoonka Baarlamaanka Puntland oo soo dhaweyn u sameeyey wafuuda baarlamaanada Garowe ku...
Garowe (SNTV) Guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka puntland ayaa magaalada Garoowe munaasibad soo dhoweyn ah ugu sameeyay golayaasha Baarlamaanada heer Fedraal iyo heer dowlad goboleed.
Ugu horeyn waxaa munaasibada ka hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland C,xakiin Maxamed Axmed waxaana uu sheegay in uu soo dhawaynayo hay,adaha wafuuda baarlamaanada ka kala socotay Dowladda SOomaaliya iyo dowlad Goboleedyada.
Mudane Mahad Cabdalla Cawad guddoomiye ku xigeenka 2aad Golaha Shacabka BFS ayaa sheegay in Garoowe ay Tahay meel nabad ah dalxiisyadii loo tagi jiray Nairobi iyo Yuganda lagu badalo.
Munaasibada waxaa soo xeray Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare BFS Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu Sheegay in munaasibadan ay tahay mid loo baahnaa uuna u mahadcelinayo madaxda baarlamaanka Puntland .
Previous articleMadaxweynaha oo adkeeyey xoojinta wadashaqeynta Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada
Next articleXafladdii Caleemo saarka Saciid Dani oo laga dheehan karay Midnimada Ummadda Soomaaliyeed